Sonia Primera Air ho an'ny Airbus FHS-TSP ampandehanan'i Skywise
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Sonia Primera Air ho an'ny Airbus FHS-TSP ampandehanan'i Skywise
Primera Air, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Riga, dia nisafidy ny Airbus Flight Hour Services - Tailored Support Package (FHS-TSP) ho an'ny fiaramanidina A321neo feno (anisan'izany ny A321LR). Araka ny fifanarahana, Airbus dia hikirakira serivisy mpiorina (dobo, tahiry eo an-toerana amin'ny toby lehibe sy ny toeram-piantsonana, fanamboarana), lozisialy, fanodinana entana, fitaterana, fitantanana teknika an-tsambo sy serivisy fikojakojana ho an'ny Primera Air. Izy io dia hotohanan'ny dobo Airbus FHS vao nisokatra tao London Heathrow sy Miami ary iarahan'ny ekipa Airbus Fleet Management (FTM) natokana ao Stansted, mifanerasera amin'ireo ekipa Airbus manerantany.
Hamafisina ny Airbus FHS amin'ny alàlan'ny data data Airbus Skywise, manararaotra ny fampiantranoana data sy ny analytics manatsara ny toetr'andro hanatsarana ny fampiasana fiaramanidina A321neo an'ny Primera Air. Ity serivisy vaovao ity dia hampiasa 'angon-drakitra lehibe' hanatsarana fatratra ny fahombiazan'ny asa, raha ampitahaina amin'ny teknolojia indostrialy ankehitriny. Misaotra an'i Skywise, Airbus FHS-TSP dia handefa mavitrika ny ampahany sy ny forecasting fitehirizana, ny fanatsarana ny fantsom-pamokarana mavitrika sy ny virtoaly, ary hanatsara ny fahombiazan'ny asa sy ny fitantanana.
Hrafn Thorgeirsson, tale jeneralin'ny Primera Air dia nilaza hoe: “Ny Airbus A321neo vaovao dia eo akaiky eo ihany. Ny iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra amin'ny fampidirana karazana fiaramanidina vaovao ao anaty kaompaniam-pitaterana an'habakabaka rehetra dia ny famoronana avy hatrany amin'ny tontolo iainana mety ho azy ireo raha ny sidina sy ny asa teknika no atao. Izany no nahatonga anay nanapa-kevitra ny hanao fifanarahana amin'ny Airbus ho an'ny Serivisy manohana ny Flight Hour sy ny fonosana fanohanana mirindra izay ampiasain'i Skywise - izay hiantohana fa i Primera hanana saina sy tanana mahay indrindra avy amin'ny Airbus hiara-miasa akaiky amin'ireo ekipa Teknika eto Riga sy Copenhagen hitazona anay ny fiaramanidina manidina ara-potoana. ”
Laurent Martinez, Lehiben'ny serivisy an'ny orinasam-pandraharahana Airbus dia nilaza hoe: "Faly izahay mandray an'i Primera Air ho mpanjifa FHS Powered by Skywise voalohany indrindra any Eropa. Izahay dia manana rakitsoratra tsara momba ny fitondrana ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fampiasana isan'andro sy ny fahombiazan'ny asa miaraka amin'ireo mpanjifantsika FHS-TSP ary faly izahay nanankinan'ny kaompaniam-pitaterana iray hafa. Faly izahay fa handefa ny vanim-potoana vaovao an'ny FHS Powered by Skywise miaraka amin'ny Primera, ary ho mpiara-miasa tanteraka amin'ny diany vaovao. ”
Ity FHS-TSP ity dia hanohana ny fisokafan'ny volana Mey ny làlan-kizoran'i Primera vaovao mankany Etazonia sy Kanada (ao anatin'izany i Newark, Boston ary i Toronto) avy amin'ireo toby lehibe eoropeanina telo (London Stansted, Birmingham ary Paris CDG).
Airbus FHS dia mirakitra portfolio misy serivisy mpiorina feno, injenieran'ny fiaramanidina ary fitantanana fikojakojana, hahafahan'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fisian'ny fiaramanidina sy ny fandefasana asa. Amin'ny alàlan'ny FHS, ny zotram-piaramanidina sy ny mpandraharaha dia afaka mampiasa ny portfolio sy ny vokatra sy serivisy malalaka an'ny Airbus, tohanan'ny ekipany manerantany momba ny aérospace.
Ny mpandeha kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana dia nahatratra 4.85 tapitrisa dolara tamin'ny fikorontanan'ny sidina paska
Airbus dia manana safidy vaovao ho an'ny kabine A380 ary i Qantas no handefa azy